'Iligi enkulu' yiBaseball - 'iligi Enkulu' Yibaseball
'Iligi enkulu' yiBaseball
ICleveland ifuna ingqalelo yethu. Ukusuka kwiNkomfa yeSizwe yeRiphabhlikhi ukuya kubuntshatsheli be-NBA yeCavaliers, ulawulo lwamva nje lwamaIndiya ukuya kwindawo eyothusayo yezobugcisa, sicinga ngesixeko ngakumbi kunangaphambili. Kule veki , Iifilimu ezintsha iphonononga ukuba kutheni iCleveland ibalulekile.
Kwakungowe-1988. AmaIndiya aseCleveland ayengekasondeli ekuphumeleleni ipenanti kwiminyaka engama-34. Ngoko nini I-Major League Umalathisi uDavid S. Ward uzimisele ukwenza umboniso bhanyabhanya malunga neqela alikhulele kulo kwidolophu yakowabo eSouth Euclid, eOhio, waqonda ukuba iya kuba njalo. kufuneka kube umdlalo ohlekisayo kuye nabani na ukuba athathele ingqalelo ingqikelelo yokuba amaIndiya ayinxalenye yogqatso lwamanqam.
Ewe, I-Major League kungenangqondo ngamanye amaxesha, kwaye ngenxa yesizathu esithile uJake Taylor (odlalwa nguTom Berenger) unokuhamba nje kuyo nayiphi na indlu nanini na. ( Abaliqela amaxesha kuyo yonke ifilimu, yena nje ingena iindawo zokuhlala zabucala engamenywanga, njengohlobo oluthile lwe-antivampire.) Kodwa nangona imingxunya embalwa yecebo, iseyeyona filimu ibalaseleyo ye-baseball yexesha lonke. Kwaye ngaphandle kokuqiqa kweWadi emva kokuyenza umdlalo ohlekisayo, I-Major League ikwayeyona bhanyabhanya ichanekileyo ye-baseball eyakha yenziwa. ISandlot yeyakudala, kodwa ibaliswa ngelensi yeenkumbulo zobuntwana ezigqwethekileyo. Umhlaba wamaphupha imalunga neqela leziporho eziphuma kwintsimi yombona. Iindaba Ezimbi Zibhere kwaye Inkunzi Durham ngokuqinisekileyo bakwincoko, kodwa abawubonisi umdlalo kwinqanaba eliphezulu. Ibhola yemali iyamangalisa, kodwa ixelwa nge-lens emxinwa; ayinakuhambelana nomda wento I-Major League ndilungile.
'Iligi enkulu' Ubambe Umoya Waso Sonke Isiseko Sabalandeli Abacinezelekileyo
Enye yezinto ezichaza ifandom lithemba. Lonke ixesha lonyaka lizisa ithuba elitsha: Mhlawumbi, mhlawumbi, oku kunokuba njalo i unyaka .
Olu lindelo lukhona ekuqaleni kwesizini nganye ye-baseball, kodwa ishedyuli yemidlalo eyi-162 ikholisa ukukhupha izinto ezothusayo ozifumana kweminye imidlalo. Ke, kukho uhlobo olukhethekileyo lokungathembani phakathi kwabalandeli bee-franchise zethamsanqa.
i-goodfellas ucinga ukuba ndiyahlekisa
Nangona ubude bexesha, nangona kunjalo, uya kubukela. Uyazi ukuba ayizukusebenza kuba ayisoze yenzeke, kodwa ukunyanzeliswa okungacacanga, okungafuniyo-okanye mhlawumbi kukukruquka - kukugcina ubukele.
Nabani na oye waphila iminyaka ebhityileyo uyayazi imvakalelo, kwaye I-Major League ibeka itenor. Abalandeli abaweli kwiinzame zeqela zokudala imincili yosuku lokuvula. Ababhali ababethayo bazinza kwelinye i-slog elide eligubungela iqela elibi , kwaye kwanomsasazi othembekileyo womdlalo kanomathotholo uyazi ukuba akukho mntu ukukhathaleleyo ngokwenene . Bonke babotshelelwe kweli qela, kodwa abonwabanga ncam ngalo.
YayiyiMoneyball Ngaphambili Ibhola yemali'
Kuyavunywa, inethoni eyahlukileyo kancinci kunefilimu kaBrad Pitt, kodwa I-Major League wabonisa i Ibhola yemali indlela yokwakha uluhlu oluphumeleleyo phantse ishumi leminyaka phambi kokuba indlela kaBilly Beane yenguqu esekwe kwisabermetrics ibambe. Icebise ukuba nokuba ubambekile kwimakethi ephakathi kunye nezixhobo ezincinci, a ibala elimdaka , kunye nobunini obungakhathaliyo malunga nokuphumelela, unokukhuphisana nepennant kunye nobuchule obuncinci.
Esikhundleni sokuchitha imali enkulu kubadlali abanezixhobo ezihlanu, umphathi jikelele uCharlie Donovan, umphathi u-Lou Brown, kunye nomqeqeshi webhentshi uPepper Leach bahamba ngokufumana abadlali abanezakhono ezikhethekileyo okanye ezimbini: uWillie Mays Hayes kunye nesantya sakhe esihlekisayo, uPedro Cerrano kunye namandla akhe. ngokuchasene neebhola ezikhawulezayo, isantya esimangalisayo sikaRicky Vaughn, uEddie Harris kunye neyakhe inkunkuma iibhola kunye nekaTaylor umdlalo-ukubiza kwaye inkunkuma-ukuthetha ubugqi.
ipilisi eblue okanye ipilisi ebomvu
Ibonise iBaseball kuyo yonke ikona
Ngokuyinxenye, ii-HBO's Ucingo Yayinyanzelisa kuba yayingena kuyo yonke imbono yolwaphulo-mthetho eBaltimore, iphonononga ubudlelwane phakathi kwemibutho yeziyobisi, amapolisa, abezomthetho, ubunkokeli besixeko, imibutho yabasebenzi, kunye naye wonke umntu ophakathi. I-Major League … ayiyo Ucingo . (Nangona uJimmy McNulty kunye noRicky Vaughn babelana ngezinto ezifanayo.) Kodwa I-Major League ibhiyozela ibaseball kuzo zonke iinkalo. Ihlola ubudlelwane phakathi kobunini kunye ne-ofisi yangaphambili, i-ofisi yangaphambili kunye neqela labaqeqeshi, kunye neqela lokuqeqesha kunye nabadlali.
U-Donovan kufuneka ahlanganise abasebenzi babaqeqeshi kunye noluhlu lokuqeqeshwa kwentwasahlobo ngelixa echithwa ngokusebenzayo ngumnini omtsha wamaNdiya, uRachel Phelps, ofuna ukuhambisa iqela; UBrown kufuneka ahambe ekunciphiseni uluhlu, emva koko aqeqeshe iqela labadlali abaneziphene ezicacileyo, ngelixa bevavanya imida yabo kwaye bebona oko benziwe. Usebenzisa izoyikiso zokutyhala ukuze uMays abethe ibhola emhlabeni, uzisa uRoger Dorn esithendeni ngokuthatha ipiss kwisivumelwano sakhe, kwaye ubonisa ukuba amehlo angalunganga kaVaughn awaboni kude ngokwaneleyo ukuba azi. apho angayiphosa khona i-fastball yakhe.
Imuvi iphinda iphonononge amandla phakathi kwabadlali, abamibono yabo yahluka kakhulu: Unazo iingcali zezilwanyana. ukuyithumela kwikhontrakthi yabo enkulu , Iinkwenkwezi zangaphambili eziphezu kwenduli zizama ukudubula kokugqibela kwindandatho, abadlali be-midlevel bafuna nje ukugcina umsebenzi wabo, kunye nama-rookies azama ukuphuma. Aba badlali baphuma kwiimvelaphi, izithethe neenkolelo ezahlukeneyo. Mhlawumbi bade baziqhelanise nevoodoo:
UTaylor, igqala lombambisi kunye neqela leglue guy, ngokuqinisekileyo ngoyena mlinganiswa uphambili, kodwa I-Major League ngokwenene ingaphezulu leensemble cast. Ward kuthiwa sika ngaphandle Indawo yomtshato kaTaylor ukusuka esiphelweni ukuqhubela eli nqaku ekhaya. Imuvi imalunga neqela - izinto ezingaphandle kwebala abadlali abahamba ngazo; usizi lokuba sendleleni kwiinqwelo-moya ezilahliwe, iibhasi neehotele; ukuba kunjani ukujongana nabalandeli kunye namajelo eendaba; kwaye kunzima kangakanani ukujongana noxinzelelo lokudlala kwinqanaba eliphezulu. Ibamba uxinzelelo olunexhala lwaphambi komdlalo, ukuzola okungcangcazelisayo phambi kwesaqhwithi: abadlali begxadazela kwiilokhari zabo, belahleka kwiingcinga zabo njengoko besusa amathandabuzo arhubuluzayo. Yonke indawo yokuvala, eyenzeka ngexesha lokudlala umdlalo omnye wamaIndiya kunye neYankees, iphinda ivelise iimbaleki zedabi zangaphakathi ezihamba ngezona zihlandlo ezinkulu zomsebenzi wabo.
Imidlalo yevidiyo yeTV
Ayibalulekanga kakhulu ngeBaseball
Hayi, umntu obethayo, umqeqeshi wesiseko sesithathu, umphathi, kunye nembaleki kwisiseko sesibini mhlawumbi akanakuba nengxoxo ende, engenamagama malunga nombono we-zany. a bunt hit-and-baleka . Kodwa I-Major League ifumana i-baseball echanekileyo xa isiza kwizinto ezininzi ezingabonakaliyo kunye neengqungquthela zelizwe laseMelika lokuzilibazisa. UHarris ugoba imigaqo kunye namaqhinga amancinci orhwebo (usebenzisa uVagisil, uCrisco, kunye ne-snot ukulayisha i-curveball yakhe). Inkolelo kaCerrano (kwaye kamva kaHarris) kumandla kaJobu yenza umsebenzi omhle wokubonisa isithethe senkolelo egqithisileyo kwi-baseball. (AmaIndiya aseCleveland obomi bokwenyani anika uJobu inkukhu ekrwada kule veki nje ). Kukho ukukhanya. Kukho imilo nabalingane beqela, ii-umps, amanye amaqela, kunye nomphathi.
Imizekelo ihlala ingaphezulu, kodwa ivakala iyinyani engaqhelekanga. Kakhulu njengokuba njani Veep ibonisa inguqulelo esengqiqweni ngakumbi yaseWashington, D.C. , kune Indlu yamakhadi yenza, I-Major League isikhumbuza ukuba ibaseball ngumdlalo abantu abaninzi abawukhathaleleyo-kodwa uninzi lwaba bantu ziibhola ezinkulu. Ukunxiba ibhulukhwe eyoluliweyo kunye nebhanti kunye nokuguqula isiqwenga somthi ukuze uphile akunangqondo ngandlela-thile, ngoko kutheni ifilimu malunga ne-baseball ingayi kuba yinto ehlekisayo?
Oku kwenza ukuboniswa kwabadlali ngokwabo bazive beyinyani, nabo. Nokuba bakumaqela amakhulu , okanye ukudlala nje i-softball ngoLwesihlanu ebusuku, inani elihle labadlali basahlonipha kwaye babambe enye yezona zinto zibalulekileyo, izithethe ezihloniphekileyo zezemidlalo: i-carte blanche ukuba ibe ukungcola okunezothe .
I-Major League Abenzi bobubi be-de facto ngabakwaYankees (njengoko befanele ukuba njalo). Inkokeli yawo? I-AL Triple Crown ophumeleleyo kunye noClu Haywood ogqwesileyo, othanda ukuzonwabisa, ngaphandle kokubetha ii-dinger, kukubiza ii-rookies uHayes kunye noVaughn inyama ngalo lonke ixesha efumana ithuba. I-Clu idlalwa ngowayesakuba ngumdlali ophambili wobomi bokwenyani uPeter Vuckovich, igqala eliligqala leminyaka eli-11, ingakumbi iBrewers. Unjani umfazi wakho nabantwana bam? umgca yaphuculwa nguVuckovich , owaxelelwa yiWadi ukuba athethe into enokuthi ithethwe yi-league enkulu kuloo meko. Abadlali be-baseball ngabona babalaseleyo.
Iyabethelela ukubaluleka koMsasazi wokuDlalwa ngunomathotholo
Iligi enkulu' s de facto nombalisi nguHarry Doyle, edlalwa yi-real-life Hall of Fame Brewers umsasazi kanomathotholo uBob Uecker. Umsasazi odlala ngewhiskey udibanisa yonke into ekwimuvi kunye, eshukuma phakathi kokudinwa okukruqulayo kunye nokubalisa okungapheliyo ngeyona ngxelo intle ye-baseball onokuthi uyive.
Uecker's juuuuuust kancinane umnxeba wangaphandle wayekwayi-off-script improvisation - kwaye mhlawumbi yaba ngowona mgca uxhaphakileyo ovela kwimuvi - kodwa ikrwempa nje umphezulu wokubaluleka komnxeba wokudlala kanomathotholo kubalandeli befranchise. Abafana abadlala i-baseball kufuneka babe ngababalisi bamabali, kwaye kufuneka babe ziinkunzi zenkomo. Akusiyo ihlabathi elikhawulezayo le-basketball okanye ibhola ekhatywayo kunye nekhefu elincinci kwisenzo; Ziiyure ezintathu zokusonta intambo ephawulwe yimizuzu embalwa yemincili. Ingaba nguHarry Caray, uVin Scully, uDave Niehaus, okanye naliphi na inani labasasazi abadumileyo, amaxesha amakhulu omdlalo - eyona midlalo idumileyo yeqela - idityaniswe ngokungenakuphikiswa kwiifowuni zabo. I-Major League ifumana oku kanye ngo-Uecker njengelizwi leSizwe.
Iwenza kwakhona amava angaphakathi kuMdlalo
Ukuba unethamsanqa, uye wafumana ithuba lokufumana okubalulekileyo umdlalo wasemva kwexesha leqela lakho. Imiboniso evela kumdlalo weCleveland womdlalo omnye kunye neYankees ibamba imvakalelo ekrwada yolo hlobo lwesihlwele. Okona kudumileyo: Ukucotha kukaRicky Vaughn, ukuhamba okumangalisayo ukuya endundumeni ukuya kwikwayala yeNto yasendle. Nangona ingumdlalo ohlekisayo, I-Major League - ngoncedo lwe-27,000 eyongezelelweyo egcwalisa izitendi - isakwazi ukudala loo mvakalelo yombane kwibala lezemidlalo:
Ngaba ukuqhuba kwe-uber kufanelekile
Isikhumbuza Ukuba Ngamanye amaxesha Isihloko seCandelo Sanele
Isiphelo semuvi si ifreyim yabadlali ababhiyozela impumelelo yabo ezukileyo yomdlalo omnye , ebanika isihloko sokuqala sesixeko se-AL East kumashumi eminyaka. Okushiyeke kungacacanga kukuba ngaba baya kuphumelela okanye baphumelele i-ALCS okanye iWorld Series-kuba ngubani okhathalayo? Akukhathaliseki ukuba kwenzeka ntoni emva koko.
amatye anqabileyo (2019)
Iqela elinye kuphela eliphumelela ubuntshatsheli kunyaka ngamnye, kwaye sikweli litye kuphela ixesha elilinganiselweyo; kufuneka uthathe uzuko lwakho apho unako.
Njengomlandeli weMariners wobomi bakhe bonke, ndibone iqela lam liphinda lisenza ipennant yamaIndiya asemva kwexesha emva kweminyaka embalwa emva koko. I-Major League wakhululwa. Ngo-1995 isizini ayizange iphele kuLuhlu lweHlabathi lweMariners, kodwa iya kuhla kwimbali kwiqela, elingekaphumeleli lonke. Umlingo weMariners yala ukulahlekelwa i-hot streak yacima i-California Angels' ye-13-umdlalo okhokelayo wecandelo lomdlalo, ukuseka umdlalo omnye we-playoff kunye neeNgelosi kwisihloko secandelo le-AL West. Emva kokuphumelela oko, oomatiloshe bajongana neYankees kumjikelo wokwahlulahlulwa, kwaye emva kokuwa bekwi-series 2-0, baye bahlangana ukuze banyanzelise umdlalo oqinisekileyo we-5. Yaya kwi-innings ye-11, kwaye emva koko:
Umdlalo unegama: i-'95 isilayidi. Okuphindwe kabini kuka-Edgar Martinez kutshiswe kwiinkumbulo ezidibeneyo zabo bonke abalandeli bakaMariners bephila. Umfanekiso kaKen Griffey Omnci. emazantsi enja ngumfanekiso oqingqiweyo. Umnxeba kaNiehaus womdlalo uyintsomi, kwaye akukhathaliseki ukuba kwenzeka ntoni emva koko.
Kodwa ukuba kuya kufuneka wazi, ooMariners baqhubela phambili baya kwi-ALCS, kwaye balahlekile. Iya kubani? AmaIndiya.
U-markelle fultz iingxaki zobuqu
yakhutshwa nini iphupha
Derrick henry fantasy ka-2019
yintoni ebhokisini se7en
Iziqendu zesipili esimnyama zibekwe kwindawo
izinto zakhe ezimnyama ziluthuli